Mgbanwe ihu igwe butere mwepu nke megafauna nke Australia, ọ bụghị ụmụ mmadụ Aborigine - Blọọgụ ahụike 2022
Mgbanwe ihu igwe butere mwepu nke megafauna nke Australia, ọ bụghị ụmụ mmadụ Aborigine
Nnyocha dị ukwuu nke ihe àmà dịnụ na-egosi na mgbanwe ihu igwe kpochapụrụ nnukwu megafauna na-awagharị na mpụga Australia ọtụtụ puku afọ gara aga, ogologo oge tupu ụmụ mmadụ Aborigine abịarute na kọntinent ahụ.
"Nkọwa nke ụmụ mmadụ mere ka mkpochapụ ahụ dabere n'echiche na-egosiwanye na ezighi ezi," ka onye edemede bụ Stephen Wroe, onye osote prọfesọ na Mahadum New South Wales kwuru na nkwupụta.
Wroe na-arụ ụka na ihe ka ọtụtụ n'ime ụdị anụmanụ 88 bụ́ ndị dịbu na kọntinent Sahul, bụ́ ndị gbara Australia, New Guinea, na Tasmania, lara n'iyi ogologo oge tupu ụmụ mmadụ erute n'agbata afọ 45,000 na 50,000 gara aga.
Ọ bụ ezie na ọ pụrụ ịbụ na ụmụ mmadụ etinyewo aka ná mkpochapụ nke ndị fọdụrụ mgbe ha bịarutere, òtù ya ahụghị ihe àmà ọ bụla e ji chie anya.
Nnyocha ọhụrụ ahụ, nke e bipụtara na ntanetị na Proceedings of the National Academy of Sciences, megidere nchoputa na-adịbeghị anya na ụmụ mmadụ na-achụ nta ọtụtụ n'ime megafauna ndị ahụ ka ha kpochapụ ihe karịrị 40,000 afọ gara aga.
Wroe rụrụ ụka na ntọhapụ akụkọ ahụ, "Enwebeghị ihe akaebe ọ bụla kpọmkwem nke ụmụ mmadụ na-eri anụ megafauna na-ekpochapụ na Sahul, ma ọ bụ ọbụna ngwa ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị maka ịchụ nta egwuregwu.
Dịka nyocha ahụ siri kwuo, enwere ihe akaebe siri ike maka naanị ụdị megafauna 8 ruo 14 na-ekpochapụ ugbu a na-ejikọta na ịdị adị nke ndị Aboriginal na Sahul. Enweghị ihe akaebe ọ bụla nke opekata mpe 50 nke ụdị sitere na oge Pleistocene ikpeazụ, nke na-agafe afọ 130,000 gara aga.
Otu n'ime ndị megafauna ndị a bụ Diprotodon optatum buru ibu rhino-sized rhino-sized rhino-sized rhino-sized, ndị kasị ibu marsupials nke dịworo ndụ, Procoptodon goliah, nnukwu kangaroos nwere ihu dị larịị, Varanus priscus, nyochaa ngwere hà agụ iyi, na Thylacoleo carnifex, "anụ ọhịa na-egbu egbu na-egbu egbu." -agụba na mkpịsị aka ha na ndị na-egbutu ezé, yana ụdị nnụnụ na-efe efe, agwọ na anụmanụ ndị ọzọ buru ibu.
Wroe gwara The Australian na eleghị anya, ndị Aborigine mbụ dị ole na ole na kọntinent ahụ, ihe ndị ọkà mmụta ihe ochie na-egosikwa na ha na-abụkarị ndị ọkụ azụ, ọ bụghị ndị na-achụ nta egwuregwu.
Ọ bụ ezie na echiche mkpochapụ megafauna gara aga metụtara ụmụ mmadụ Aborigine maka ụzọ "ọrụ ugbo ọkụ" ha si ekpochapụ odida obodo maka ịchụ nta, nyocha sedimenti ọhụrụ na-egosi na ọkụ na-esikarị na-esite na ihu igwe na-agbanwe ogologo oge tupu ụmụ mmadụ abịarute.
Nyocha ọhụrụ na-egosi usoro iheomume nke Pleistocene nke ọtụtụ n'ime megafauna Australia lara n'iyi n'ime ọtụtụ "window mkpochapụ" nke mgbanwe ihu igwe na-ebute, ogologo oge tupu ụmụ mmadụ Aboriginal abịarute na kọntinent 45, 000 afọ gara aga. [PNAS]
"Ọ bụ ugbu a na-apụtawanye ìhè na mwepu nke megafauna nke Sahul mere ihe karịrị iri iri, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ narị puku afọ, n'okpuru mmetụta nke enweghị ike ịpụ apụ, ọ bụ ezie na ọ na-agbanwe agbanwe, ọnọdụ ihu igwe," ka Wroe kwuru na nkwupụta ya.
Ihe ngosi gburugburu ebe obibi dị ka ihe ndekọ isi ice nke Antarctic na-egosi na Sahul nwere nnukwu mgbanwe ihu igwe n'ime afọ 400,000 gara aga. Ọ̀tụ̀tụ̀ akọrọ nke ihu igwe na-arịwanye elu nwere ike gbanwee ọtụtụ ebe obibi ndị megafauna nke mere ka ha laa n'iyi ogologo oge tupu ndị Aborigine abịarute.
Ọ bụ ezie na ọmụmụ ihe a na-ewepụ ndị Aborigine Australia na nko maka ịchụpụ mkpochapụ nke Pleistocene megafauna, ụmụ mmadụ nke oge a enweghị ọtụtụ ihe ha ga-eme ememe.
Otu ihe akaebe na-eto eto na-egosi na mgbanwe ihu igwe na-emebekwa ụwa ọzọ maka oke mbibi, dị njọ dị ka nke kpochapụrụ dinosaur afọ 65 gara aga- ma e wezụga oge a, ụmụ mmadụ kpatara ya.